1.9 Play RTMP na VLC e
VLC bụ a na-ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ n'etiti ya ọrụ. Ọ bụ anụ, ìhè, na a na-agbanwe mgbasa ozi ọkpụkpọ tụnyere ọtụtụ ndị ọzọ na heavyweights. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị n'ọtụtụ ebe na media Player maka ma Windows na Mac.
Gịnị mere na ị hụrụ n'anya VLC ọkpụkpọ?
Ọtụtụ n'ime anyị ga-asị n'ihi VLC akwado otu n'usoro nke media formats, nke na-agụnye MPEG ọtụtụ isi formats. Ọ dị mfe iji na awade ọtụtụ media akpọ ESPN, REUTER, Discovery, na National Geographic.
Mmepe nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nye mgbe nile mmelite iji jide n'aka na ọ na-anọgide ndị kasị mma ọdịyo na mgbasa ozi ọkpụkpọ ngwa na niile nyiwe.
Download VLC maka Windows 7
VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka a free download. E nwere ọtụtụ pụrụ ịdabere na isi mmalite maka nbudata VLC.
Ọ bụ ukara website nke VLC ọkpụkpọ si ebe ị nwere ike ibudata software. The website bụ ebe kacha mma ịmatakwu banyere software na yiri ozi ọma. Ị na-ahụ download njikọ site na homepage.
Ọ bụ ihe ọzọ na website, nke bụ a pụrụ ịdabere na isi iyi maka nbudata VLC. Ọ bụ a na-ewu ewu isi iyi maka nbudata software. Ị pụkwara ịhụ fim bụ maka, Uru, na cons nke VLC. Ị pụrụ ịchọ VLC on Google, na ị ga-achọta Softonic njikọ maka software.
Downoad.com bụ a na-ewu ewu website maka maara reviews na ozi ọma metụtara software. Ị nwere ike gụọ dee si Editor, ele reviews, nkọwa, file size na ọnụ ọgụgụ nke downloads. Ị nwere ike ozugbo download software si website na ala
File Hippos bụ a yiri website ka CNET na Softonic. Ọ na-enye oru nkọwapụta, mgbanwe log na onye ọrụ na-ekwu. Gụkwuo banyere software na zuru ezu. Download njikọ dị site na software profaịlụ.
Nke a website na-enye gị zuru ezu nyochaa na mba nke website ziri ezi na nchịkọta akụkọ ma ahịa. I nwekwara ike ile ochie version nke software. Download njikọ dị na nri na peeji na-ewe nkeji ole na ole maka echichi.
Ajụjụ na Njehie
1. VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ mmechi nsogbu
Ị nwere ike ahụwo mkparịta ụka window "VLC media ọkpụkpọ nwere nsogbu na kwesịrị imechi. Anyị bụ ndị nwute maka mgbaka ". Mgbe nke a kwuo igbe, VLC closes. Reinstalling software ga-aka, ị ga-obere amara. Nsogbu a na-ebilite n'ihi na nke rụrụ arụ nhazi faịlụ. N'ihi ya, ị ga-ọcha nhazi na cache faịlụ. Ị nwere ike ịchọta faịlụ na C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ AppData \_ agagharị \_ VLC. Dị nnọọ ihichapụ vlcrc faịlụ, na cache faịlụ. Nke a ga-ike ọhụrụ nhazi na cache faịlụ.
1. Building Font Cache nsogbu
Mgbe ọ bụla ị na-agbalị na-egwu a media faịlụ, ị na-ahụ a Building font cache mkparịta ụka igbe. Ọtụtụ n'ime oge VLC otú nke a wughachi Akara ókwú maka ndepụta okwu na videos. Ị nwere ike emechi a kwuo igbe-adịgide adịgide. Gaa na ngwaọrụ menu na n'okpuru mmasị aga Gosi Ntọala. Ịmụbawanye Video ntinye na ekpe na-aga ndepụta okwu / OSD. Gbanwee ederede-ejere modul ka dummy font renderer na-azọpụta ya. Ugbu a agbalị na-emeghe na otu faịlụ ma hụ ma ọ bụrụ kwuo igbe na-egosi.
2. agba ọsọ VLC on ndakọrịta mode
Na windows 7 ọtụtụ nwere na-enweghị uche ndakọrịta nsogbu. A na-eme na okenye mbipute nke software. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba ọsọ VLC na ndakọrịta mode, gaa na VLC na akara ngosi na nri pịa iji họrọ Troubleshoot ndakọrịta. Ndakọrịta ọkachamara ga-akpaghị aka ego maka mbipụta. Ị ga-nhọrọ, ma na-agbalị na-atụ aro ntọala ma ọ bụ Troubleshoot usoro. Ọtụtụ mgbe, i na-aga n'ihi na-atụ aro ntọala na-ahọrọ dakọtara version nke sistemụ na-agba ọsọ usoro ihe omume. Ọ ga-arụ ọrụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, na-agbalị ọzọ nhọrọ nke na-ewe gị site usoro nke nzọụkwụ na ndị ọzọ na nhazi nhọrọ.
Ọ bụ ezie na VLC arụ ọrụ dị ukwuu, ọ mgbe nọgidere oge ochie na ụfọdụ uche ziri ezi. Na ọhụrụ na ngwaọrụ na internet, nnọọ mma Player dị. Wondershare Player Bụ ọhụrụ afọ mgbasa ozi ọkpụkpọ na-arụ ọrụ na Mac na Windows. Ọ na-enye enweghị nkebi nkwado nke ọ bụla ọdịyo na video format si downloads, dere media on PC, DVD 's, smartphone, mbadamba, na ọtụtụ ndị ọzọ na ngwaọrụ. Ya kpam kpam simplifies gị mgbasa ozi ahụmahụ. Ebe a na-ya atụmatụ:
- Ọ na-arụ ọkọlọtọ na HD video s nke formats dị ka MKV, MPEG, mp4, avi na ọtụtụ elu àgwà videos. N'ihi na audios, ọ na-akwado wma, mp3, FLAC wdg Ị nwere ike mfe Ibu Ibu ịnyịnya ibu, SSA, SRT
- Wondershare Ọkpụkpọ malite oge bụ ụzọ na-erughị na egwuregwu dị ka VLC, nke na-ewe oge dị ukwuu na ebe nchekwa.
- Site na-amụba HD video ngwaọrụ, ọ na-enye oké nwere video playback ahụmahụ. The agba, ezu ma ngagharị bụ magburu onwe. Ọ na-eji elu Koodu na GPU ngwaike optimizing ka na-enye ihe kasị mma video ahụmahụ.
- N'adịghị ka oge ochie anya nke VLC, ọ na-eburu kensinammuo imewe na multi-ọtọ buttons na ọgụgụ isi igodo.
- Ị nwere ike Bookmark ọkacha mmasị gị ọdịnaya maka mfe ohere na faịlụ na-akpaghị aka haziri na listi ọkpụkpọ. Ị na-eji na niile ngwaọrụ.
- E nweghị ad pop gbasie na imewe na-elekwasị anya na-enye gị ezi ntụrụndụ ahụmahụ na Dịkwa n'Usoro imewe.
Olee otú Ọkụ Windows Movie Onye kere Project ka DVD
> Resource> Windows> Download VLC media ọkpụkpọ maka Windows 7 were were